Fanambadiana vy - inona no omeny fampakaram-bady?
Psychology and Relationships Fianakaviana sy mariazy
Fanambadiana vy - hevitra momba ny fanomezana sy ny fankalazana
Ny mpivady iray izay nifanakalo ny fanambadiana fanindroany faharoa ary nankalaza ny fampakaram-bady vy dia mendrika ny fanajana. Nandritra ny taona teo anelanelan'izy ireo, tsy nahomby ny tsy fifankahazoan-kevitra, fantatry ny olona fa saika ny zava-drehetra. Miray tsy amin'ny fitiavana fotsiny izy ireo, fa koa amin'ny tombon-tsoa iraisana, ny fotoana, ny trano fonenana, ny fananana, ny ankizy.
Vola amin'ny fampakaram-bady - firy taona?
Nisy fampakaram-bady vy, 11 taona no niara-nonina. Nandritra izany fotoana izany, ny mpivady dia tsy maintsy niatrika olana maro, olana, fifandirana ary nametraka. Taona maro taty aoriana, lasa nihanatanjaka kokoa ny fifandraisana, azo itokisana kokoa, azo ampitahaina amin'ny vy mafy toy ny vy. Olona maro no miady hevitra fa tsy fotoana ela loatra ny 11 taona, azo inoana fa nianatra nifanaja ny mpivady, nankasitraka, nitandrina tsara ny tapany faharoa.
Inona no nomena fampakaram-bady?
Nahazo fanasana ho amin'ny fankalazana ny fanontaniana hoe: inona no azonao atao amin'ny fampakaram-bady. Voalohany dia mila mihaino tsara ireo lovia vita amin'ny vy. Mety misy zavatra toy ny gilasy sy sotro, sombin-tsoavaly, sokitra vita sokitra. Arahabaina tsara ny fampakaram-bady ho an'ny lehilahy iray tia fiarakodia - setroka miaraka amin'ny fitaovana, vehivavy iray - raozy sy kitapo. Azonao atao koa ny manolotra ireto zavatra manaraka ireto:
mirindra amin'ny rafitra tsara tarehy;
Inona no hanomezana fampakaram-bady ho an'ny namana?
Amin'ny ankapobeny, ny namana sy ny olona akaiky izay mahafantatra momba ny daty nahatongavana dia mahafantatra fa ny mpivady dia tia. Indraindray ny safidin'ny fanomezana dia miteraka ny fahasarotana izay omen'izy ireo amin'ny tsingerin-taona amin'ny fampakaram-bady. Mila mifantoka amin'ny tsy fitovian'ny vola fotsiny ihany isika, fa koa amin'ny zava-misy fa mety ary mifanaraka amin'ny toe-tsain'ny tsingerintaona.
Ny tabilao no fanomezana mahazatra indrindra. Trano fisakafoanana, solomaso, solomaso, fanidinana - ireo rehetra ireo dia tonga lafatra amin'ny fety ho an'ny fianakaviana. Saingy ireo mpivady sasany dia mino fa tsy dia misy dikany loatra izany, ary mampitandrina avy hatrany ireo fanomezam-pahasoavana izay karazana fanomezana tiany ho raisina.
Inona no homeny ny vadiny ho mariazy amin'ny vy?
Fianakaviana maro no tia mankalaza ny andro firavoravoana amin'ny fampakaram-bady, amin'ny toerana milamina sy maotina. Saingy ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny fampakaram-bady ho an'ny mpivady dia mitovy amin'ny ilaina. Ny lehilahy dia afaka manamboatra ny trano, ohatra, manamboatra afobe, manova ny ati-trano. Aoka ho azo antoka ny manolotra voninkazo amin'ny vadiny 11 isa. Misy marika: ny fotoana lava kokoa dia ireto voninkazo ireto, ny safidim-pifaliana sy fahasambarana bebe kokoa ho an'ny fiainan'ny mpivady.
Ny vady dia tsy ho diso amin'ny fanomezam-pahasoavana raha manome ny fanaka vita amin'ny metaly fotsy izy, ary misy metaly misy metaly eo aminy. Hahita hafaliana mahafinaritra izy ary azafady raha ny faharoa kosa raha manolotra azy:
firavaka amin'ny lamosina vy;
firavaka amin'ny metaly sarobidy;
Fiambenana miaraka amin'ny brasele;
peta-drindrina tsy mahazatra;
Inona no hanomezana fampakaram-bady ho an'ny vadiny?
Ny vehivavy be fitiavana sy mahay manavaka dia mahafantatra tsara izay tokony hanomezana ny vadiny ho mariazy amin'ny vy. Niara-niaina taminy nandritra ny 11 taona izy, efa nianatra ny tiany. Raha mbola misy olana anefa, dia afaka manome torohevitra ianao. Mety tsy hisy olona handao ny tabilao maoderina na smartphone amin'ny modely farany. Ny fanomezana tsara ho an'ny vadiny amin'ny fampakaram-bady vy dia fitaovana fiara. Tsara ny manamarika fa tamin'ny raharaha an-jiro no nisy azy na nanana farafahakeliny kely amin'ny metaly.
Ny vady dia mety ho lohahevitra toy izany:
bucket for champagne;
Tsy ampy fotsiny ny miarahaba anao amin'ny fampakaram-bady. Ny fampakaram-bady vy dia midika ho fitandremana ny fomban-drazana sy fombafomba sasany, mba hahafahan'ireo mpivady hiaina mifanaraka sy mifanaraka tsara amin'ny roa taona manaraka.
Misy fomban-drazana tranainy, raha tsy maintsy midina ao anaty lakana ny mpivady mba hanasa ny ratsy rehetra voavoly nandritra ny taona. Rehefa vita ny fombam-pivavahana, dia mihazona ny tanany ny mpivady.
Tamin'ny andron'ny faha-11 taonany, ny vadin'ilay vehivavy dia tokony hanantona kitron-tsoavaly matevina eo ambonin'ny varavarana fidirana. Ny tena zava-dehibe dia ny fisian'ny tongony. Ho lasa karazana amaleta izany , mba hamonjena ny olona amin'ny olana sy olana maro. Ampaherezo ny fianakaviana mozika. Ohatra, manjera ny lehilahy, ary manome azy hoho sy hoho ny hamaroany.
Misy koa fifanakalozana fifanakalozana. Ny zava-misy dia ny hoe amin'izao andro izao dia manova zavatra sasantsasany ao amin'ny efitra fiasany ny mpivady. Amin'izao fotoana izao, tokony hijery ny mason'ny andaniny izy ireo ary hilaza ireo teny izay ho tonga teny miavaka sy faniriana ny hanana fiainana fanampiny.
Andraikitry ny vavolombelona amin'ny fampakaram-bady
Wedding amin'ny loko Tiffany
Ahoana no hanadinoana ny olon-tianao?
Nahoana no rava ny olona?
Misy vahaolana ve ny fifandraisana amin'ny lavitra?
Wedding amin'ny fomba "Alice in Wonderland"
Hery fampakaram-bady - ahoana no hankalazana ary inona no hanomezana fampakaram-bady hazo?
Mofo matavy tsy manam-pahaizana - iza no tokony hofidiana tsara?
Fomba hisafidianana ny tsara inhaler - ny tsiambaratelon'ny fividianana mahomby
Belly amin'ny 3 volana amin'ny maha-bevohoka azy
Ny fararano dia fotoana hikarakarana ny tenanao sy ireo olon-tianao
Zeyn Malik dia mitaraina noho ny olana ara-pahasalamana lehibe
Adriana Lima sy Matt Harvey nankalaza ny fitsingerenan'ny baseball mpilalao
Kirsty Pie «Delight»
Wedding volo eo amin'ny kianja
10 fialan-tsasatra izay ahafahanao mandositra ny ririnina